admin, Author at Keen Education Center
မြန်မာ တယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်ကို တိုးဝင် ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းအောင် မဖြစ်မနေ လေ့လာရမှာပါ။
အကြောင်းရင်းကတော့ ကိုယ်လေ့လာလိုသော ပညာရပ်တွေဟာ အင်္ဂလိပ်စာကောင်းမှ ဖတ်ရ လေ့လာရတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ အစိုးရ ကျောင်း ၁၀ တန်း ဟာ GCE O’ Level နဲ့ အညီသတ်မှတ်ပေးထား ကြောင်း သိရလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ မေးခွန်း ကတော့ တော်တော်လေး အဆင့် ကွာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
GCE O’ Level စာမေးပွဲ အင်္ဂလိပ်စာ မေးခွန်းပုံစံလေး ကို မသိသေးသူများ လေ့လာလို့ရစေရန် ရှင်းပြပေးပါမယ်။
GCE O’ Level မှာ အင်္ဂလိပ်စာ ကို4Skills ဖြေရပြီး အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
1. Paper 1 – Writing
2. Paper2– Reading
Paper 1 (70 marks) ဖြစ်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းခွဲထားပါတယ်။
1. Editing (10 marks)
2. Letter writing (30 marks)
3. Essay writing (30 marks)
Paper2Reading comprehension (50 marks)
Listening (30 marks}
Oral (30 marks) ဖြစ်ကြပါတယ်
စုစုပေါင်း (180 marks) ဘိုးဖြေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Paper 1 မှာ
1. Editing ဆိုတာက စာပိုဒ် တစ်ခုမှာ Language ပိုင်း အသုံး အနှုံးတွေ ကို မှားနေရင်ပြင်ပေးရတာဖြစိပါတယ်။
2. Letter writing အနေနဲ့ ကတော့ အကြောင်း အရာဖတ်စရာ (ကြော်ငြာ၊ သတင်း) စသဖြင့် ဖတ်စရာ တခုပေးထား ပြီး အဲဒါကို ကိုး ကားပြီး မေးခွန်း ကရေးခိုင်းတဲ့ စာ ကို စာလုံးရေ ၂၅၀-၃၅၀ ရေးရပါတယ်။
3. Essay Writing အတွက်စာလုံးရေ ၂၅၀-၃၅၀ ရေးရပါတယ်။
ရေးရမည့် ခေါင်းစဉ် နမူနာအချို့ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
a) The world would beabetter place without conflict. What are your views?
b) The Internet is notaplace for users to air their views freely. Do you agree?
reading comprehension မှာ section4ခုဖြေရပြီး IELTS မေးခွန်း တွေထက် ပိုပြီးအသေးစိတ်ဖြေရပါတယ်။
Listening ကတော့ section4ခု နားထောင်ရ ပြီး IELTS နဲ့ ဆင်ဆင် တူပါတယိ။
1) စာပိုဒ် တစ်ပုဒ်ကို အသံထွက် ဖတ်ခိုင်းပြီး အသံထွက် မှန် မမှန် စစ်ဆေးခြင်။
2) သတင်း ရုပ်ပုံ တစ်ပုဒ် ပေးထားပြီး အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေး ခြင်း၊ မိမိအမြင်ကို တင်ပြ ခြင်း စတာတွေ ကိုပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ မေးခွန်း ပုံစံကို ကြည့်ရင် မြန်မာ ပညာရေး ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဟာ နိုင်ငံတကာအဆငိ့ နဲ့ တော်တော်လေး ဝေး နေတာကိုတွေ့ရ လို့ အားမလိုအားမရဖြစ်မိပါတယ်။
၁၀ တန်း မေးခွန်း ဟာ ဘယ်လို ၊ ရေးခဲ့ရတဲ့ အက်ဆေး တွေဟာ ဘယ်လို ဆိုတာ ဖြေခဲ့ဘူး တဲ့ သူတိုင်း သိမှာ မို့ အထူးမပြောတော့ ပါဘူး။
ဒါကြောင့် တကယ် တိုးတက်ပြီး အများနဲ့ ရင်ဘောင် တန်း နိုင်ရန် နည်းလမ်း ရှာ ပြီး self study ကို များများ လုပ် ကြစေလိုကြောင်း အကြံပြု သတိပေးတိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ်။
ဘာသာစကား လေ့လာနေသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး 画蛇添足(huà shé tiān zú) ဆိုတဲ့ တရုတ်စကားပုံလေးတစ်ခုအကြောင်း ကြည့်ရအောင်။
အဲဒီအသုံးအနှုန်းလေးဟာ မြန်မာမှာရော အင်္ဂလိပ်မှာပါ သုံးနေကျ ဖြစ်ပါတယ်။
မလိုအပ်ဘဲ အပိုလုပ်မိလို့ အကျိုးမရှိဖြစ်ရတာကို ဆိုလိုတာပါ။
မြန်မာလို “ပြင်လွန်းတော့ ဖင်ချွန်း” လို့ ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်မှာတော့ -“Leave well enough alone” ဒါမှမဟုတ် “let well enough alone” လို့ သုံးပါတယ်။
ဒီစကားပုံလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နောက်ခံပုံပြင်လေးကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်။
It isaChinese idiom withastory behind it. Once in the ancient Chu state, an aristocrat grantedapot of wine to his men after offered sacrifice to the late ancestors. However, the wine was not enough for them to share among all of the men and it would be better for one of them to have it all.
The men consulted with one another, “Since the pot of wine is far from enough for all of us but abundant forasingle person, why don’t we drawasnake on the ground, and whoever be the first to finish drawing should get the wine?” Agreeing to the proposal, everyone started drawing. Afterawhile, one of the men accomplished his picture. Noticing that the others were still painting, he was elated and said, “I can even add several feet to the snake!”He thought that he might add four feet to the snake as he had enough time to do so.
However, before he managed to complete the drawing of feet, another man had finished his job. The man grabbed the pot from the man who first completed the painting and remarked, “The snake does not have feet. How can you add feet to it?” Upon saying so, he drank up all the wine in the pot. Finally, the one who added feet to the snake lost the wine he was about to get!
Nowadays, we often use it when describing someone who is doing unnecessary things.
The moral of the story is that sometimes you may ruin something by going too far.
တစ်ခါတုံးက Chu နယ်မြေက ဂုဏ်သရေရှိသူဌေးတစ်ဦးဟာ သူတို့ရိုးရာအရ ဘိုးဘွားတွေကို ပူဇော်ကန်တော့တဲ့ ပွဲတစ်ခု ကျင်းပပါသတဲ့။ ကန်တော့ပွဲပြီးတော့ သူ့ရဲ့နောက်တော်ပါတွေကို ၀ိုင်အရက်တစ်အိုး ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဝိုင်အရက်ဟာ လူအများသောက်ရန် မလုံလောက်ပါဘူးတဲ့။ (သူဌေးဆိုတော့ သူများအပေါ်စေတနာနည်းတာ နေမှာပေါ့။)
ဒီတော့လူတွေက အားလုံးမလောက်မင ဝေသောက်ကြမဲ့အစား တစ်ယောက်ယောက်က အကုန်သောက်တာ ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ သဘောတူကြပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဝိုင်အရက်ကို ဘယ်သူသောက်သင့်သလဲဆိုတာ သူတို့အားလုံး တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က အောက်ပါအတိုင်း အကြံပေးပါတယ်။
“ဒီဝိုင်အရက်ဟာ အားလုံးအတွက်မလောက်ဘဲ တစ်ယောက်စာပဲရှိလို့ ဘယ်သူသောက်သင့်တယ်ဆိုတာပုံဆွဲပြီး
ဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဗျာ။ မြေကြီးပေါ်မှာ မြွေရုပ်ဆွဲကြမယ်။ အရင်ဆွဲလို့ပြီးတဲ့သူက ဝိုင်အရက်ကိုသောက်သင့်တယ်။”
အားလုံးလဲ သူပေးတဲ့အကြံအတိုင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီး မြေကြီးပေါ်မှာ မြွေရုပ်ကို စဆွဲကြပါတယ်။
ခဏကြာတော့ လူတစ်ယောက်က ဆွဲလို့ပြီးသွားတယ်။ ဆွဲပြီးလို့ ဟိုသည်ကြည့်လိုက်တော့ သူများတွေဆွဲလို့မပြီးသေးတာကိုသတိပြုမိတာနဲ့ ခပ်သောသောလေး ပြောလိုက်တယ်။
“ကျွန်တော့်မြွေရုပ်ကို ခြေထောက်တွေထည့်ဆွဲဘို့တောင် အချိန်မီသေးတယ်ဗျာ။”
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ သူလည်း ဆွဲပြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ မြွေရုပ်မှာ ခြေထောက်လေးချောင်း ထပ်ဆွဲထည့်ပါလေရော။ ဒါပေမဲ့ သူမြွေရုပ်ခြေထောက်တွေ ဆွဲလို့မပြီးခင်မှာဘဲ တစ်ခြားတစ်ယောက်က မြွေရုပ်ကို အပြီးသပ် ဆွဲပြီးသွားတယ်။ အဲဒီလူက ပထမဆွဲပြီးသွားတဲ့လူ လက်ထဲက ဝိုင်အရက်အိုးကို ဆွဲယူပြီးပြောတယ်။
“မြွေဆိုတာ ခြေထောက်မရှိတဲ့သတ္တဝါဘဲ။ ခင်ဗျားက ခြေထောက်ထပ်ထည့်နေစရာမှ မလိုတာဗျာ။”
ပြောလည်းပြော ဝိုင်အရက်ကိုလည်း မော့သောက်ပစ်လိုက်တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ပထမလူက အရင်ဆွဲပြီးလျက်နဲ့ မလိုတာကို အပိုလုပ်မိလို့ ကိုယ်ရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကို
ဒီပုံပြင်လေးကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး မလိုဘဲနဲ့ အပိုထည့်လုပ်ချင်သူတွေကို သတိပေးဘို့ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ စကားပုံကို ထားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံပြင်လေးကပေးတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ မလိုအပ်ဘဲ အပိုလုပ်လွန်းရင် အကျိုးယုတ်တတ်ပါသတဲ့။
အပိုင်းကိန်းတွေ ကို အင်္ဂလိပ် လိုအသံထွက် ဖတ်ဘို့ကြုံလာရင် ဝေဝေဝါးဝါး မဖြစ်ဘဲ မှန်ကန်အောင် ဘယ်လိုဖတ်မလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါမယ်။
1. Cardinal Number (သဘာဝကိန်း) ဥပမာ၊ 1, 2, 3, 4………
2. Ordinal Number (အစဉ်ပြကိန်း) ဥပမာ၊ 1st , 2nd, 3rd, 4th, …….
ပိုင်းဝေကို .. Cardinal Number (သဘာဝကိန်း) .. ဖြင့်ဖတ်ပါ။
ပိုင်းခြေကို .. Ordinal Number (အစဉ်ပြကိန်း) .. ဖြင့်ဖတ်ပါ။
ပိုင်းဝေမှာ ၁ ဆိုရင် တော့အောက်ပါအတိုင်းဖတ်ပါ။
1/3 (1/3rd = one/third)
1/6 (1/6th = one/sixth)
1/7 (1/7th = one/seventh)
ပိုင်းဝေမှာ ၁ ထက်ပိုတဲ့ အများကိန်း ဆိုရင် တော့အောက်ပါအတိုင်းဖတ်ပါ။
2/3 (2/3rd s = two/thirds)
5/8 (5/8th s = five/eighths)
7/16 (7/16th s = seven/sixteenths)
2 ½ ( two andahalf)
3 ¼ (three andaquarter) စသည်ဖြင့်ဖတ်ပါမည်။
ဒီတခေါက်မှာတော့ (Táng) ခေတ်ကဗျာ ဆရာ (王维) (Wáng Wéi) （701－761) ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ 相思(xiāng sī) ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်ကို ကြည့်ရအောင်နော်။
相思(xiāng sī) ဆ်ိုတာကတော့ လွမ်းဆွေး တမ်းတ ခြင်း ကို ဆိုလိုပါတယ်။
红豆生南国 (Hóng dòu shēng nán guó)
春来发几支 (Chūn lái fā jǐ zhī)
愿君多采撷 (Yuàn jūn duō cǎi xié)
此物最相思 (Cǐ wù zuì xiāng sī)
ဒီကဗျာလေးမှာပါတဲ့红豆(Hóng dòu) ခေါ် ပဲနီစေ့ ဆိုတာ အနီ ရောင်နဲ့ အနက်ရောင် စပ်ထားတဲ့ အလွန်ချစ်စရာကောင်း သော ရွေးစေ့လေးများ ဖြစ် ပါတယ်။ မြန်မာ ပန်းထိမ်ဆရာများ ကတော့ ရွှေချိန်တွယ်ရာများ သုံးကြပါတယ်။
ရွှေ ၁ကျပ်သားဟာ ၁၆.၆ ဂရမ်ရှိပြီး မြန်မာအချိန်အတွယ် အရ ၁၆ ပဲရှိပါတယ်။
၁ပဲကတော့ ၈ရွေးရှိ ပြီး ၁ကျပ်သားမှာ ၁၂၈ ရွေး လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ပန်းထိမ်မှာ အထည်အပ်ရင် ဥပမာ ၁ကျပ်၊ ၃ပဲ၊ ၄ရွေး ဆိုပါက ၁ိ၊၃ဲ၊၄ွး လို့ရေးပေးကြတာတွေ့ဘူး မှာပါ။
တရုတ် စာပေမှာ ရွေးပင် ကို အလွမ်းသစ်ပင် အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ရွေးစေ့လေးများဟာ အလွမ်းရဲ့ သင်္ကေတ အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်တဲ့။ဒီလို သတ်မှတ်ရတဲ့ အကြောင်း ပါးစပ်ရာဇဝင်လေး တစ်ခု ကတော့ဒီလိုပါ။
တစ်ခါက စစ်ထွက်သွားတဲ့ ခင်ပွန်းဟာ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ပြန်မလာနိုင်တဲ့ခင်ပွန်းကို လွမ်းတဲ့ ဇနီးသည်ဟာ နေ့တိုင်းရွေးပင် နားမှာ ငိုကြွေး တမ်းတ ရပါတယ်တဲ့။
ငိုကြွေးရင်းနဲ့ဘဲ ဒီ အပင်နားမှာ ရင်ကွဲနာကျပြီး သေသွားရပါတယ်တဲ့။
အဲဒီကစ လို့ နှောင်းလူ တို့ဟာ ရွေးပင် ကို အလွမ်းသစ်ပင် အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ရွေးစေ့လေးများဟာ အလွမ်းရဲ့ သင်္ကေတ အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်တဲ့။
ဒါကြောင့်”红豆”(Hóng dòu) ခေါ် ပဲနီစေ့ ကို”相思豆 (xiāng sī dòu)လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။
ဒီကဗျာ လေးကို မြန်မာလို နဲ့ အင်္ဂလိပ် လို အောက် ပါအတိုင်း ခံစား ပြန်ဆို ကြည့် လိုက်ပါတယ်။
The red beans grow in the Southland
Flourish on the branches with the spring
I wish you could gather more
As they represent our deepest love that we yearn.
အလွမ်းဆုံး ရဲ့ ဒီသစ်ပင်။
အခုအခါမှာတော့ငယ်ရွယ်သူများဟာ ရွေးစေ့လေးများကို ကိုယ့် ခံစားချက်နဲ့ကိုယ် စုဆောင်းကြ လက်ဆောင်ပေးကြပါတယ်။ ရွေးစေ့လေးများနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အမှတ်တရ များကိုလည်း အဆင်သင့်ဝယ် နိုင်ကြပါတယ်။
စင်ကာပူမှာနေတဲ့သူများ အလွမ်းစေ့များကို စုဆောင်း လိုရင်တော့ အောက်ပါနေရာတွေမှာ ရှိပါတယ် လို့ကြားဘူး ပါတယ်။
1. Near City Hall MRT (in the church compound)
2. Near Dhoby Ghaut MRT
3. Near Jurong Island
ကဲ.. အလွမ်းပင်အောက် မှာ အလွမ်းစေ့လေးများ ကောက်ရင်း အလွမ်းများ ပျောက်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
“ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ မြန်မာနှစ်သစ်” ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့်
၁၀၊၀၄၊၁၆ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် “KEEN” မှ သံဃာတော်များ အား သင်္ကန်း နှင့်တကွ နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း ရာတွင် ပါဝင်ကူညီကုသိုလ် ယူခဲ့ကြပါသူများအား အထူးပင် ကျေးဇူးတင် ကြောင်း မှတ်တမ်းတင် အပ် ပါသည်။
Clementi ကျောင်း ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တ (ဒေါက်တာ ရာဟုလာ)မှ ကိုယ်တိုင် ကြွရောက် တရားချီးမြှင့် ခဲ့ပြီး ဆရာတော်မှ မိမိတို့ တိုးတက်ကြောင်းအတွက် လိုက်နာကျင့်ကြံအပ်သည်များကို မမေ့မလျော့ ကြစေရန်အောက်ပါ တို့ ကို သတိပေး ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
1. တဦးနှင့်တဦး မေတ္တာ စိတ်ဖြင့်ဆက်ဆံ ပြီး မပျင်းမရိ ထကြွလုံ့လရှိရမည်။
2. မိမိရောက်ရှိရာနေရာဒေသမှာ လိုက်လျောညီတွေဖြစ်အောင် လေ့လာကျင့်ကြံနေထိုင်တတ်ရမည်။
3. မိမိရရှိထားသော ချမ်းသာ နှင့် တကွမိမိကို်ယ် တိုင် ကို မပျက်စီးစေရန် ကာကွယ် ထိမ်းသိမ်း တတ်ရမည်။
4. အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ အားလုံး အာရုံငါးပါး နောက်သို့ လွန်ကျုးလိုက်စားခြင်း မပြုမိစေရန်သတိပြုရမည်။
5. မိတ်ဆွေကောင်း များ ထံမှ လေ့လာသင်ယူခြင်း ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် ခြင်းဖြင့်မိမိ တိုးတက်ရာ ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
မိမိလုပ်သင့် သည့်အရာများကို မလုပ်ဘဲ မလုပ်သင့်သည့် အရာများကို အချိန်ပေးလုပ်ဆောင် ခြင်းသည် ဆင်းရဲခြင်းသို့ ဦးတည်လိမ့်မည်ဖြစ် ကြောင်း သတိပေးဟောကြားခဲ့ပါသည်။
ကွန်ပြူတာ hard disk တွင် Data များကို သိမ်းဆည်းထားမှသာ မိမိတို့ ပြန်လည်အသုံးပြုလိုသော အခါ မှီငြမ်း အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သကဲ့ သို့ အလားတူစွာ မိမိတို့ နှလုံးအိမ်တွင်လည်း ကောင်းသောအရာများကို သိမ်းဆည်း ထားမှသာ ကောင်းသောအရာများကို ပြန်လည်ဆင်ခြင် နိုင် မည် ဟု ဥပမာပေး ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ပြုသမျှသော ကောင်းမှုကုသိုလ် အစုစု ကို မဟာပထဝီမြေကြီးထု နှင့် အတူ လေထု၊ရေထု တို့ ကို သက်သေပြုကာ ရေစက်ချ အမျှအတန်းပေးဝေခဲ့ ကြပြီး မင်္ဂလာနှစ်သစ်ကိုပျော်ရွှင်စွာ ကြိုဆိုခဲ့ကြပါသည်။
အားလုံးဘဲ….မင်္ဂလာနှစ်သစ်နှင့် အတူ တိုးတက် အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်း လိုက်ပါသည်။